Orange ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
Orange ( 2016 )
2016 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Anime Series လေး တစ်ခုပါ … တစ်ပိုင်းကို ၂၄ မိနစ်စာ နှင့် အပိုင်း ၁၃ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး Sci-Fi , Drama , Romance & School ဇာတ်လမ်းလေးပါ ….
အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ်ရှိတဲ့ နဟိုတကာမိယ လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်း စတက်တဲ့ ပထမနေ့ရက်မှာပဲ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ရပါတယ် …
အိပ်ရာထနောက်ကျပြီး ထူးဆန်းတဲ့ စာတစ်စောင်လည်း ရောက်ရှိလို့နေခဲ့တယ် …. အဲ့ဒီစာကတော့ အသက် ၂၆ နှစ် ရှိတဲ့ သူမ ကိုယ်တိုင် ကပဲ ပို့လိုက်တဲ့ စာလေးပါ …
ပထမတော့ နဟို လည်း စာထဲမှာ ပါတဲ့အကြောင်းတွေကို အရေးမကြီးဘူးထင်ပြီး လျှစ်လျူရှုလိုက်တယ် … နောက်ပိုင်း စာထဲက အကြောင်းအရာတွေက တကယ်ဖြစ်လာပြီး … ခခဲရုနာရုဆဲ လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေမှန်း သိခဲ့ရတယ် …
စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ခခဲရု က အနာဂတ် မှာ သူတို့အတူ မရှိနေနိုင်ရတာလဲ ? ဘာလို့ ခခဲရု ကို ကယ်ခိုင်းရတာလဲ ? နဟို တို့ သူငယ်ချင်း ငါးယောက်က ခခဲရု ကို ကယ်တင်နိုင်မှာလား ?
သို့လော် … သို့လော် လေးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အဆုံးသတ်ထိကို စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ …
ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာလည်း အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို အတိုင်းထက်အလွန် တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ …
Live Action အဖြစ်လည်း ထွက်ရှိထားတာကြောင့် ဒီနာမည်ကြီး anime လေးကို ခံစားကြည့်ရှုကြပါဦးလို့ …
Rating အရလည်း IMDb မှာ 7.6/10 နှင့် MyAnimeList မှာ 7.71 အသီးသီးရရှိထားပါတယ် …
Episode 13 : Openload Episode 13 : SolidDrive
Studio: Daxa Production, TMS Entertainment, Toho Animation
Starring: Kana Hanazawa, Kazuyuki Okitsu, Makoto Furukawa, Natsumi Takamori, Rika Kinugawa, Seiichirou Yamashita,
2017 ထဲမှာထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese series လေးတွေထဲကမှ Delicious Destiny ဆိုတဲ့ Comedy Romance ကားလေးကိုMMATV Page ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … စုစုပေါင်း ၅၆ပိုင်းပါဝင်ထားပါတယ် … Delicious ဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် ထိုင်းမင်းသားချောMikeရဲ့ရှယ်မိုက်တဲ့ဟင်းချက်လက်ရာတွေကိုပါကြည့်ရမှာနော် ( အပြင်မှာချက်တတ်လားဆိုတာတော့မသိဘူး ) Mike D’Angelo ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ … My…
Trailer: Orange ( 2016 )